Muxuu salka ku hayaa muranka ka taagan mooshinka Guddoomiye Jawaari? | Muxuu salka ku hayaa muranka ka taagan mooshinka Guddoomiye Jawaari? | Hal Sheegaha La Hubo
Muxuu salka ku hayaa muranka ka taagan mooshinka Guddoomiye Jawaari?
Muddadii sanadka ahayd ee ay dhisneyd dowladda hadda jirta, waxaa dhowr jeer soo baxay warar sheegaya mooshin ka dhan ah qaar ka mid ah madaxda sare ee dowladda, balse mar kasta dib ayay wararkaasi ka beenoobi jireen.
Balse isbuucii la soo dhaafay ayay xildhibaano mooshin lama filaan ah ka keeneen guddoomiyaha baarlamaanka Maxamed Cusmaan Jawaari.
Waxaa mooshinka guddoomay ku xigeenka Jawaari, Cabdiwali Muuday, waxaase dhacay arrimo isbadalo xawli ku socday ah.
Guddiga joogtada ee baarlamaanka ayaa shir jaraa’id ka sheegay in mooshinkii Jawaari uu jabay maadaamaa ay ka noqdeen 13 xildhibaan, sidaasi darteedna ay kusoo hartay 91 xildhibaan, taas oo aanan buuxinaynin guntankii loogu talogalay.
Goobtaas shirka jaraa’id waxaa fadhiyay Cabdiwali Muuday, balse saacado kadib ayuu warbaahinta la hadlay, wuxuuna sheegay in mooshinka uu meelmaray, isaga uu gollaha horgeyn doono.
Waxay noqonaysaa markii koowaad oo mooshin laga keeno Prof Maxamed Cusmaan Jawaari oo ay u tahay markii labaad oo uu noqdo guddoomiye baarlamaan.
Baarlamaankii sagaalaad oo codka kalsoonida uu baarlamaanka kala laabtay labo Ra’isulwasaare, Jawaari ma jirin wax mooshin ah oo laga keenay.
Mooshinkan ayaa waxa uu ku soo beegmayaa maalin oo kaliya ka dib markii baarlamaanka uu cod aqlabiyad ah dalka kaga mamnuucay shirkadda DP World ee Imaaraatka laga leeyahay oo qandaraas la gashay Jamhuuriyadda iskeed ugu dhawaaqday madaxbannaanida ee Somaliland si ay u maamusho dekeda Berbera.
Sidoo kale, wuxuu mooshinka yimid maalmo kadib markii Jawaari iyo maamulka baarlamaanka ay dowladda Turkiga la saxiixdeen mashruuc lagu dhisayo guriga baarlamaanka oo ay ku kacayso lacag dhan $100 milyan oo doolar.
Lama oga waxa mooshinka kusoo beegay labaddan arrimood ee waaweyn.
Yaa gadaal ka riixaya mooshinka Jawaari?
Prof. Maxamed Cusmaan Jawaari oo shir jaraa’id qabtay ayaa si toos ah xukuumadda iyo Ra’isulwasaare Xassan Cali Kheyre ugu eedeeyay in ay gadaal ka riixayaan mooshinka, wuxuuna sheegay in xitaa amnigii baarlamaanka ay la wareegeen ciidammo aanan guddoonka baarlamaanka ka amar qaadanin oo ay soo direen laanta fulinta, isaga oo intaas ku daray in loo baahanyahay in uu baarlamaanka ku shiro meel madaxbanaan.
Maalinkii xigtay waxaa dhismaha golaha baarlamaanka la wareegay ciidammo ka socda Midoowga Afrika (AMISOM), kuwaas oo waajibaadyadooda koowaad ay ka midyihiin illaalinta xarumaha waaweyn ee dowladda sida baarlamaanka, Madaxtooyada iyo meelaha muhiimka ah.
Dadka taageersan Jawaari ayaa sheegay in xildhibaanada mooshinka keenay ay ku jiraan xubnaha golaha wasiirada, kuwaas oo ka tirsan baarlamaanka.
Labo maalmood kadib waxaa shir jaraa’id kasoo muuqday qaar ka mid ah golaha wasiiradda oo Jawaari ugu baaqay in uu iscasilo, haddii kale ay meelmarin doonaan mooshinka.
Ugu dambeyntii Prof Jawaari ayaa ogolaaday in mooshinka cod la galiyo, balse waxa uu shuruud ka dhigay in muddo 10 maalmood gudahood ah codkaas lagu qaado, islamarkaasna kulanka lagu qabto meel dhexdhexaad ah, sida uu hadalka u dhigay.
Iyada oo uu Jawaari ogolaaday in mooshinka codka la galiyo, ayay wali sii socdaan kullamadii ay lahaayeen xildhibaanada keenay, iyo baaqyadii ahaa in uu is casilo, taas oo keentay in taageerayaasha jawaari su’aal geliyaan sababta loo sugi la’yahay waqtiga mooshinka, haddiiba ay kalsooni ku qabaan in ay heystaan cod ku filan in Jawaari la rido.
Inkasta oo Ra’isulwasaaraha iyo madaxweynaha aysan marnaba ka hadlin qalalaasaha siyaasadeed ee jira, ayay Caasho Axmed Cabdalla oo horey xildhibaan u ahaan jirtay qabtaa “Haddii mar mooshinka la keeno, sharciga waxa uu qabaa in guddoomiyaha uu noqonayo xubin caadi ayuu noqonayaa, guddoonkana waa uu ka fariisanayaa”.
Maxaa lagu eedeeyay Jawaari?
Sida ku qoran warqadda mooshinka, xildhibaanada keenayna ay warbaahinta marar kala duwan u sheegeen, waxaa Jawaari lagu eedeeyay xil gudasho la’aan, cabburin aragtida xildhibaanada iyo eedeymo kale oo culculus.
Sakariye Yuusuf waa falanqeeye siyaasadeed oo ka tirsan hay’adda xasarada adduunka ee ICG, ayaa yiri “Waxaan akhriyay mooshinka hadda laga keenay Jawaari , eeddana cidda soo jeedisay ayaa laga rabaa in ay soo caddeyso, aniga baarlamaanka kama mid ahi, mana sheegi karo in eedeymahaas ay wax ka jiraan iyo in kale, balse waxa meesha yaala ayaa ah in baarlamaankan kii ka horeeyay iyo kanba uu hoggaanka u hayay Jawaari, xaqiiqda marka la fiiriyana wuxuu ku hoggaaminayay waayo-aragnimo, aqoon iyo odaynimo, Soomaaliyana maanta kama maaranto odaynimo”.
Eed kasta oo loo heysto Jawaari, waqtiga xasaasiga ah ee uu mooshinka kusoo beegmay ayay dadka qaarkood farta ku fiiqeen in uusan munaasab ahayn in xilligan uu dalka galo qalalaase siyaasadeed sida uu sheegay Maxamed Ibraahim oo ah falanqeeye siyaasadeed oo ku sugan dalka Jabuuti. wuxuuna yiri “Muddo 28 sano ah, siyaasiyiinta Soomaaliya ma aysan samaynin wax dib u heshiisiin qaran ah, waxaan aniga ku ku qiimeeyay siyaasad jiho wareertay, haddiiba maanta uusan baarlamaanka ka shiri haynin sidee dalkan la’isugu soo dhaweeyaa, dar xumaa keentay in siyaasadda Soomaaliya sidan loo fikiro” .
Qodabada dastuurka iyo xeer hoosaadka ee codeynta mooshinka
Taas waxa ay ka dhigantahay in ay mooshinka ogol ugu codeeyaan 184 xildhibaan, marka si kale loo yiraahdana in Jawaari uu mooshinkan ka badbaado, waxa uu u baahanyahay 92 xildhibaan oo kaliya oo codka diidmada ugu codeysa mooshinka.